काठमाडौं, ६ असार । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने स्वास्थ्य अवस्था । जनताले भारी मतले विजयी गराएका सांसद । उनी अस्पतालको बेडमा छन् तर खुट्टामा नेल झुण्ड्याइएको छ ।
यो दृश्य हो सांसद रेशम चौधरीको । उनी अहिले वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
चौधरीलाई परिवारका सदस्य र जेल प्रशासनबाट खटिएका हतियारधारी प्रहरीले कुरिरहेका छन् । डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजायँ भोगिरहेका राजपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको अवस्था र उनीप्रति सरकारले गरेको व्यवहारबाट आजित भएर वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल लेख्छन्, ‘सांसद रेशम चाैधरीसँग शत्रुवत व्यवहार गरेकाेछ सरकारले । याे बर्बर सरकारी व्यवहारका बारेमा के भन्छन् देशका विज्ञजन र मानव अधिकारवादी ? खुट्टामा नेल ठाेकेर अस्पतालमा उपचार । गडबड छ याे ओली तन्त्र ।
सांसद रेशम चाैधरीसंग शत्रुवत व्यवहार गरेकाेछ सरकारले । याे बर्बर सरकारी ब्यबहारका बारेमा के भन्छन देशका विज्ञ जन र मानव अधिकारवादी? खुट्टामा नेल ठाेकेर अस्पतालमा उपचार । गडबड छ याे ओली तन्त्र । pic.twitter.com/n5gwleJ196
— Kishore Nepal (@kishorenepal) June 21, 2019
पारिवारिक स्रोतका अनुसार चौधरीको फोक्सो र ढाडमा समस्या देखिएपछि बिहीबार अस्पताल भर्ना गरी उपचार थालिएको हो । चौधरीको खुट्टामा प्रहरीले मोटो नेल लगाइएको छ । अस्पतालभित्रै पनि दमन नरोकेको परिवारका सदस्यहरुको गुनासो छ ।
दुई सातादेखि बिमार चौधरीलाई जेल प्रशासन र चिकित्सकको सल्लाहमा बिहीबार अस्पताल भर्ना गरिएको हो । फोक्सोमा समस्या उत्पन्न भएपछि उनलाई सास फेर्न गाह्रो हुने गरेको छ । ढाडको बोनम्यारोमा पनि समस्या देखिँदा उनी हिँडडुल गर्न नसक्ने भएका छन् ।
टीकापुर घटनापछि देशमा रहन नसक्ने भएपछि निर्वासनमा बसेका चौधरी २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कैलाली–१ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
अर्का पत्रकार तथा लेखक कुसुम भट्टराई ‘आदिम बर्बरता’ शीर्षक दिएर फेसबुकमा लेख्छन्-
राजबन्दीलाई अस्पतालमा उपचार गरिरहँदा पनि यसरी गोडामा फलामे साङ्लो बाँध्ने हर्कत मैले २०४६ साल यता देखेको थिइन । पहिलो पटक यस्तो आदिम बर्बरता देख्दा स्तब्ध छु । प्रधानमन्त्री ओलीजीले आफु १४ वर्ष जेल बस्दासमेत यस्तो बर्बरता भोग्नुभएको थिएन होला । यो हिटलरी शैली हो, इदी अमीन र मुसोलीनीहरुले गर्ने हर्कत हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोग र नेपालस्थित सम्पूर्ण मानवअधिकारवादीहरुले रेशम चौधरीमाथिको यो हर्कतविरुद्ध एक्सन चाल्नुपर्छ ।
यति मात्र हैन, एउटा विरामीमाथि यो हदसम्मको मिस विहेभ भइरहेकोमा देशभरका चिकित्सकहरु किन मौन ? के बिरामीको उपचार यसरी हुन्छ ? अस्पताल भर्ना भइसकेपछि रेशम चौधरी बिरामी हो, बिरामीमाथि बिरामीकै ढंगको व्यवहार हुनुपर्छ । यो चिकित्सकीय इथिक्सविपरीत हो । चिकित्सक संघले तत्काल यसमा आपत्ति जनाएर त्यो साङ्लो फुकाउन लगाओस् ।
ज्ञानेन्द्र तामाङ ट्वीट गर्दै भन्छन्-
अस्पताल को बेडमा ढलिरहेको रेशम चौधरी,
खुट्टामा हाती बाँध्नेजत्रो सङ्लोको नेलले कसेको ।
यस्तो अभागी कोहि पनि नहुन्।। 😭😭😭
— Gyanendra Tamang (@GtDoshi) June 21, 2019
खगेन्द्र भण्डारी लेख्छन्-
रेशम चौधरी अपराधी हुन सक्छन् । तर उनी यही देशको नागरिक हुन । हाम्रै समाजका एक सदस्य हुन् । प्रहरी हिरासतमा रहेको एउटा नागरिकलाई खुट्टामा नेल लगाएर अस्पतालमा भर्ना गरिएको दृश्य मलाई निको लागेन सरकार । के एउटा कैदीले मान्छे भएर बाँच्न पाउने अधिकार छैन सरकार ? pic.twitter.com/NdHUe87ipQ
— Khagendra Bhandari (@bhandari_jee) June 21, 2019
महेन्द्र धमला भन्छन्-
प्रचण्ड अनि सेनाको प्रमुख ले युद्ध कालमा प्रत्यक्ष रूपमा आदेश दिएर निर्दोष जनता मार्नेलाई किन जन्मकैद गरिँदैन ?रेशम चौधरी ले यसरी आदेश त दिको थिएन।यही हो जातिय अहङ्कार प्रचण्ड अनि रुकमाङ्गद कटवाल बाहुनले खुलम् खुला हत्या गर्दा प्रधानमन्त्री र सेना प्रमुख हुनु थारुको छाेरा जेलमा
— Anil Lama (@AnilLam40696692) June 21, 2019
सुरेन्द्र कु. बम्जन भन्छन्-
एउटा जन निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी जेलको बन्द कोठाभित्र पशु झै फलामे साङ्लामा त्यो पनि बिरामी अबस्थमा रहेको जानकारी । कता जादैछ देशको कानुन ?? के यो मानबियता हो ? pic.twitter.com/kmIcCRHlY9
— Surendra k. Bamjan (@surendra_bamjan) June 21, 2019
दिल निशानी मगरको प्रतिक्रिया भने यस्तो छ-
तानाशाहीहरु र नश्लबादीहरुको कोपाभाजनमा परेका, अस्पतालको शैयामा पशु झै बाँधिएका निर्दोष अनि बिरामी संसद रेशम चौधरी। pic.twitter.com/eIUWn5sqRs
— Dil Nisani Magar (@dil_nisani) June 21, 2019